Oghere: Paswọdu Paswọdu na Ahụmịhe Onye Ọrụ | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 9, 2014 Tuesday, May 2, 2017 Douglas Karr
Ikekwe mkpebi kachasị mma m mere afọ a na nrụpụta ọrụ m na nchekwa m na-abanye maka Dashlane. Anaghị m echekwa okwuntughe m niile maka ekwentị mkpanaaka, desktọọpụ na websaịtị nke ọma, sistemụ ezoro ezo. Eziokwu bu, amaghi m ihe okwuntughe m ozo abughi ebe m na-eji ya Dashlane Ihe mgbakwunye Chrome ka ịbanye site na weebụ, na Desktọpụ Version maka ngwa, yana Mobile App maka ntinye ngwa ngwa.
Dashlane nwere atụmatụ ole na ole ọzọ m hụrụ n'anya. Mbụ, enwere m ike ịkekọrịta okwuntughe na ndị ọrụ enyere ikike - dị ukwuu maka njikwa ọfịs m, onye na-akwụ ụgwọ ego, njikwa ọrụ, yana ndị mmepe. Enwere m ike inye ha ohere zuru oke iji hụ paswọọdụ ma ọ bụ ikike nwere oke iji ya. Ha na-enye m kọntaktị mberede m nwere ike ịtọ. Ọ bụrụ, na ebumnuche ọ bụla, enweghị m ike inye mmadụ ikike na ndepụta mberede m - ha nwere ike ịrịọ nnweta. Ọ bụrụ na azaghị m n'oge ụfọdụ, ha ga-enweta nke m Dashlane akaụntụ.
Ebe ọ bụ na m na-eji ya gafee ngwaọrụ, netwọk, na nyiwe - Enwere m mmasị ịnweta otu nchekwa nchekwa etiti maka nbanye ọ bụla yana nyocha nyocha. Dashlane na-agwakwa m paswọọdụ anaghị ezu ezu ma na-etinye m n'ihe egwu. Ugbu a, enwere m okwuntughe pụrụ iche, siri ike nke dị iche maka sistemụ ọ bụla m banyere. Yabụ ọ bụrụ na mmadụ enwetala otu n’ime okwuntughe m, ha anaghị enweta ọrụ ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ha gbalịa ịbanye na Dashlane, ekwesịrị m ịnye ikike ngwaọrụ ọ bụla na-anwa ịbanye.
Nke wetara m nsogbu m na okwuntughe. Dashlane emeela ka ndụ m dịrị okpukpu iri mana ụfọdụ ngwa na-eme ka ndụ m sie ike okpukpu iri. M na-arịa ọrịa nke ukwuu ịbanye paswọọdụ ọ bụla 2 sekọnd maka otu ikpo okwu. Melite ngwa… ị ga-abanye. Download a song… i kwesịrị tinye paswọọdụ gị. Gbanwee nhazi nhazi… ị ga-abanye paswọọdụ gị. Nke a n'agbanyeghị eziokwu ahụ Abanyelarị m n'otu oge ahụ!
Ajula ndi mmadu ka ha mee ihe siri ike, nke bu okwuntughe siri ike nke n’enweghi nghota n’otu ihuenyo… wee jua ha ka ha nyefee okwuntughe n’oru obula imesiri n’ime ihe omuma onye oru! Site na sistemụ dịka Dashlane, anaghịzi m eburu okwuntughe m n’isi, naanị m na-edetuo na mado ha. Nke a pụtara na m ga-abanye Dashlane, detuo okwuntughe, mepee ngwa ahụ, nyefee paswọọdụ, wee na-agafe ya na arịrịọ ọ bụla.
Enwere m mmasị na ụfọdụ ngwa mkpanaka na-agagharị na koodu ọnụọgụ 4 ma ọ bụ usoro swipe kama ime ka m nyefee paswọọdụ 14 niile na okpu, nọmba, akara, wdg. M hụkwara eziokwu ahụ n'anya na m nwere ike iji mkpịsị aka m na ngwaọrụ iOS. iji nyochaa na ngwa ụfọdụ (onye ọ bụla kwesiri inwe nke a!).
Nye ndị nwere paswọọdụ echekwara echedo nhọrọ dị mfe iji bulie ikpo okwu. Achọghị m ịhapụ oge na ịchọrọ paswọọdụ ọzọ, mana mgbe m nọ na ngwa ahụ, ọ bụ ihe nzuzu.
Ngosi: Ọ bụrụ na ị debanyere aha a Dashlane akaụntụ na m Dashlane njikọ dị n'elu, ana m enweta ọnwa 6 nke Dashlane adịchaghị!
Tags: dashlanepasswordahụmahụ onye ọrụ